भारतले नेपाली भूमि मिचेको बिषयमा ओलीभन्दा झन् कडा बनेर निस्किए प्रचण्ड, मोदी नै झस्किनेगरी यतिसम्म भनिदिए ! – GALAXY
भारतले नेपाली भूमि मिचेको बिषयमा ओलीभन्दा झन् कडा बनेर निस्किए प्रचण्ड, मोदी नै झस्किनेगरी यतिसम्म भनिदिए !
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी शर्मा ओली भन्दा एक कदम अगाडी बढेर भारतले सिमा मिचेको बिषयमा बोलेका छन् । पछिल्लो समय उत्पन्न हुँदै आएको नेपाल–भारत सीमा विवादबारे उनले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
सोमबार नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले लेखेको पुस्तक ‘काठमाण्डू डिलेमा स् रिसेटिङ इन्डिया–नेपाल टाइज’ बारेमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले ठूलो राष्ट्रको जमिन सानो राष्ट्रकोमा पस्यो भने फरक नपर्ने बताए ।
उनका अनुसार सानो राष्ट्रको जमिन ठूलो राष्ट्रकोमा पस्यो भने सानोको हालत खराब हुन्छ । ‘ठूलो राष्ट्रको जमिन पनि ठूलो नै छ । जनसंख्या पनि धेरै छ । त्यसो भएको हुनाले ठूलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई थोरै–थोरै जमिन सानोको उतापट्टी पस्यो भनेपनि खासै फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘सानो ठूलोकोमा पस्यो भने त हालत खराब हुन्छ नि सानोको त ।’
सीमा विषयमा भारतका नेतृत्वकर्ता र बुद्धिजीवीले बुझ्न जरुरी रहेको पनि प्रचण्डको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो सेन्सिटिभीटिलाई पनि भारतीय नेतृत्व र बुद्धिजीवले गहिरो गरि समीक्षा गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा हाम्रो सम्बन्ध ९सीमाना० का समस्या समाधान गर्न सक्छ । त्यसैले समाधान गर्न नसकिने छैन । हामी मिल्नुको विकल्प छैन । सिमानाका जे–जे हामीले पहिलेदेखि भनेका छौँ समस्याहरू छन् । ती संवादको तरिकाद्वारा, उदार मन लिएर समाधान गर्न नसकिने कुरा छैनन् ।’